Vince Russo anotsanangura icho chaicho chikonzero nei WWE isinei nezve ratidziro yeTV zvekare (Exclusive) - Wwe
Vince Russo anotsanangura icho chaicho chikonzero nei WWE isinei nezve ratidziro yeTV zvekare (Exclusive)
Vince Russo akabata shanduko muWWE bhizinesi modhi uye akadzikisa kukosha paTV ratings panguva yechangobva kuitika episode yekunyora naRusso naDr Chris Chris Featherstone.
Iye aimbova munyori akatenda kuti WWE haisati yaisa pamberi chigadzirwa chayo cheTV uye kuti kuwedzera kwayo midhiya enhau kusvika kwaive kwakanyanya kukosha kuvakuru vekambani.
Russo akatsanangura kuti bhizinesi reWWE rave kutenderera nekuwedzera maficha enhau uye akataura kuti WWE Mutungamiri Nick Khan pamwe akashandisa metriki paanenge achibata nema network makuru nemakambani.
Vince Russo akanzwa materevhizheni eWWE aive asisiri kutarisirwa sezvakakosha kubva pabhizimusi maonero sezvo iko kusimbisa kwaive kuri kuwedzera kukosha nekuwedzera manhamba enhau.
Russo akawedzera kuti nzira nyowani iyi yainge yakanganisa mhando yezviratidzwa zveWWE. Hezvino zvakataurwa naRusso Dr.Chris Featherstone pane ichangoburwa Kunyora naRusso:
'Bro, ini handifunge kuti iyo TV inoratidza uye ratings, handifunge kuti ndiwo maitiro avari kuita bhizinesi futi. Bro, ivo vari kuita bhizinesi zvichienderana nenhamba yavo yemagariro enhau. Nick Nick paari kuenda kunze, hama, ari kuvarova nemabhiriyoni ezviratidzo. Ndipo panotarisirwa netiweki nemakambani kukwira newe nekuda kwekukosha kwekusvika kwako pabhodhi, uye ivo vari kutarisa pasocial media, hama. Ndizvo zvavari kutengesa. Nekudaro, ini handifunge, hama, iwe hausisina kukosha kwema ratidziro, uye kana usisina kukosha kwezviyero zvekare, iwe hauna kukosha kweterevhizheni. Ndizvo chaizvo zvazvinouya, hama. Zviratidzo zveTerevhizheni hazvina kukosha kwavari kubva kune bhizinesi rekuona sezvazvaive kare ikako. Ndozvazviri, 'akatsanangura Vince Russo.
Izvo hazvina basa kana zvakanaka kana zvakaipa: Vince Russo pane zviri muWWE
Vince Russo akataura kuti WWE haitombofaniri kuburitsa zvemukati zvakanaka sezvo huwandu ndiyo yega inodikanwa mune yazvino zvirongwa zvepasi.
mibvunzo yekubvunza yako yakakosha imwe
Russo akati vanopa zvemukati vanoda masosi senge WWE kuti varambe vachipa mashoo nezvirongwa, uye hunhu hwechigadzirwa hachina basa.
'Vanoziva izvozvi, mukoma. Zvemukati ndimambo, 'Vince Russo akaenderera mberi,' Vaya vanopa zvemukati, vanoda zvemukati. Zvinoita kunge vasina hanya kuti chii. Ndiri kureva, Chris, iwe neni taigona kutarisa mutsetse wematepi anoratidza chero zuva revhiki, uye isu tichaseka kanenge 75% yemitambo. Ivo vanongoda zvemukati. Saka, kana WWE yaigona kungoramba ichitsvaga zvirimo, uye vanhu vari kuzoibhadhara nekuti vanoda zvemukati. Hama, hazvina basa kuti zvakanaka here kana zvakaipa. Izvo hazvina basa kuti ndiani Becky Lynch anodzoka uye anotarisana. Hazvina basa. '
Inguva yekuti Becky Lynch atore varume ve #WWE ? @THEVinceRusso anotenda kudaro, ndokutsanangura kuti sei paKunyora naRusso. https://t.co/wfsL3yYsNI
- Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) Nyamavhuvhu 25, 2021
Iwe unobvumirana here nekutora kwaVince Russo? IWWE haisi kunyatso kupa kukosha kwakaringana kumitambo yayo yeTV nekuda kwekuwedzera tarisiro kune mamwe marongero ebhizinesi? Ridza mhere muchikamu chemashoko pazasi.
Kana paine chero makotesheni anoshandiswa kubva pachinyorwa chino, ndokumbirawo uwedzere H / T ku SK Wrestling.
maitiro ekuudza kana musikana mudiki achikuda
ndinokwana kupi munyika
ndingaita sei kuti hupenyu hwangu huve pamwe chete
sei kusanyanya kuita hasha muhukama
kusangana nemumwe munhu kekutanga mushure mekunyora mameseji
maitiro ekuita kuti nguva iende nekukurumidza kumba
zvinonakidza zvinhu zvekutaura nezvazvo neshamwari